ရန်ကုန်မြို့ပတ် ရထားလမ်း စီမံကိန်း ပြီးစီးပါက မူလနှစ်နာရီကြာ စီးနင်းနေရသည့် ခရီးကို တစ်နာ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်မြို့ပတ် ရထားလမ်း စီမံကိန်း ပြီးစီးပါက မူလနှစ်နာရီကြာ စီးနင်းနေရသည့် ခရီးကို တစ်နာ??
ခြောက်နှစ်ကြာ ဆောင်ရွက်နေသော ရန်ကုန်မြို့ပတ် ရထားလမ်းစီမံကိန်းပြီးစီးလျှင် မူလနှစ်နာရီကြာစီးနင်းနေရသည့် မြို့ ပတ်ခရီးစဉ်ကို အချိန်တစ်နာရီဝန်းကျင်ဖြင့် သွားလာနိုင်တော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဝင်းခန့်က ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေ ၂၁ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြား ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင်ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အတွက် ဒုတိယတစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ပို့ဆောင် ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဆောင်ရွက်မှုများကို ရှင်းလင်းပြော ကြားရာတွင် ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း စီမံကိန်းကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်အကြား ခြောက်နှစ်စီမံကိန်းကို ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်နေပြီး စီမံကိန်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ဝ၆ သန်းခန့်အသုံးပြုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ အခြေခံဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းကို ဂျပန်အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး အချက်ပြစနစ် DEMU တွဲများကို တင်ဒါခေါ်ယူရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပြီး မြို့ပတ်ရထားအတွက် 11 Train Set ၆၆ တွဲရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်း ဝန် ဦးဝင်းခန့်ကပြောသည်။
DEMU တွဲကို ရန်ကုန်- တောင်ငူဘက်ကို ရထားလေးတွဲစာ ဒီ စီမံကိန်းတွေပြီးရင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပတ်ရထားလမ်းအတွက် မြန်မာဘက်မှဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းတွေကတော့ သံချောင်းကိုး ချောင်းဆက် သံလမ်းတွေကို ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ လမ်းခင်းကျောက် တွေကို စုရပါတယ်။ ဘူတာရှစ်ခုကို ပြုပြင်နေပါတယ်။ အုတ်ခြံစည်း ရိုးတွေကာနေတယ်။ ရထားလမ်း အကြီးစားပြုပြင်ခြင်းကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲ တင်ဒါခေါ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းပြီးသွားရင် ရန်ကုန်မြို့ပတ်လမ်းကို အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် မူလအချိန်နှစ်နာရီလောက်ကြာအောင်စီးနေရတဲ့အခြေအနေကနေ တစ်နာရီဝန်းကျင်နဲ့ ပြည်သူကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မယ့် အနေအထားဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သော မီးရထားလမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၂၃ ခုနှစ် အကြား ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အဆင့်တစ်အနေဖြင့် ရန်ကုန်-တောင်ငူလမ်း ပိုင်း ၁၆၆ မိုင်ကို ဂျပန်အကူအညီဖြင့် ချေးငွေယန်း ၂ဝ ဘီလီယံ၊ အဆင့်နှစ်အတွက်ယန်း ၂၅ ဘီ လီယံ အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်ထား ကြောင်း ရန်ကုန်-တောင်ငူအကြား လမ်းပိုင်းသုံးခုကိုပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းအား တင်ဒါဈေးညှိထားကာ ပထမအရစ်အဖြစ် DEMU ၂၄ စီးကိုလည်း တင်ဒါခေါ်ထား ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်က တရုတ်နိုင်ငံက ချေးငွေကန်ဒေါ်လာ ၅၄ သန်း ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေသည့် မြစ်ငယ် လူစီးတွဲတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းသည် ယခုနှစ်မတ်လက တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့် ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လေအိတ်ပါ လူစီးတွဲ ၂၁ တွဲကို အပြီးတည် ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ နေပြည်တော်မီးရထားစက် ခေါင်းတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတစ်ခုကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ချေးငွေကန်ဒေါ်လာ ၄၇ ဒသမ ၉ သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နေရာ မြင်း ကောင်ရေ ၂ဝဝဝ ရှိ စက်ခေါင်းသစ် ၁ဝ လုံးကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် မတ်လတွင် အပြီးတည်ဆောက်မည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
(၁၃)ကြိမ်မြောက် သုတစွယ်စုံ စာပေဆု ရရှိသူစာရင်း ထုတ်ပြန်၊ သုတစွယ်စုံ တစ်သက်တာ စာပေဆုရှင် ဦ??
အီတလီတွင် နှင်းအကြီးအကျယ် ကျဆင်းမှုကြောင့် လမ်းမများပေါ်တွင် ကား ထောင်နှင့်ချီ၍ ပိတ်မိ၊ လူေ??
ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် Cable ကြိုးခိုးသူများ မြဝတီရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီး